Falan-qayn: Kulankii golaha shacabka ee maanta oo u baaqday kooram la’aan xili baarlamanku fasax jiray 23 cisho – Kalfadhi
Kulankii golaha shacabka baarlamanka federaalka ah ee Soomaaliya ay maanta ku yeelan lahaayeen magaalada Muqdisho ayaa u baaqday kooram la’aan, sida uu ku waramayo weriyaha Kalfadhi ee golaha.
Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in fadhigu uu baaqday kooramka oo aan dhamayn. Wuxuu xildhibaanada maqan ka codsaday in ay shaqada yimaadaan.
Kulankan ayaa looga hadli lahaa xeerka iibka qaranka ee hore golaha loogu qaybiyay.
Golaha shacabka ayaa fasax ku maqnaa muddo saddex iyo labaatan cisho ah, sababo la xiriira tobankii dambe ee bisha rammadaan oo qaarkood ay cimor aadeen iyo fasaxa maalmaha ciidda.
Siddeed cisho ka hor ayaa guddiga joogtada ahi shaaciyeen wakhtiga ay dib u bilaabanayaan hawlaha kalfadhiga shannaad ee baarlamanka, waxayna xiligaas isla qaateen maanta in baarlamanku soo shaqo galo.
Xildhibaan Guuleed Cayduruus oo ka tirsan golaha shacabka ayaa saxaafadda u sheegay in guddoonka looga baahan yahay in ay xeer hoosaadka waafajiyaan xubnaha baarlamanka ee shaqada ka maqan fasax la’aan.
Kalfadhigan oo furmay 27 maarso isla markaasna socday ilaa 22kii Maajo oo ah markii ay baarlamanku fasaxa kooban galeen waxaa u qabsoomay 12 kulan oo keliya waxaana ka baaqday 11 kale, inta badan kulamadu waxay u baaqanayeen kooramka oo aan buuxisamin.
Golaha shacabka oo ku kala aragti duwan qaabka looga hadlayo dilka 10 qof loogu geystay Gaalkacyo